နောက်ဆုံးတွင် Loot Crate သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိလာသည် Gadget သတင်း
နောက်ဆုံးတော့ Loot Crate ကိုစပိန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်
Juan Colilla | | ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ, NOTICIAS
ဒီနေ့လူအများစုကစောင့်မျှော်နေရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ စောင့်နေစရာထိုင်စရာအကွက်တစ်ခုအဖြစ်ထိုင်လျက်ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရတာကြာပြီ Loot သေတ္တာ ကျနော်တို့ဝေးဝေးနေစဉ်တွင်၎င်းသည်နေရာများစွာသို့ပို့ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မနေ့ကကတည်းကဖြစ်သည် Loot Crate သည်စပိန်သို့တရားဝင်တင်ပို့သည်.
ယနေ့ Loot Crate ကိုမသိသောသူများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသိသောသူတို့သည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဘာပါဝင်သည်ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါမည်။ သင်နှင့်မည်သို့ငှားရမ်းမည်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
1 Loot Crate ဆိုတာဘာလဲ။
Loot Crate ဆိုတာဘာလဲ။
Loot Crate သည်အံ့အားသင့်စရာစာပို့သေတ္တာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သင်သည်စာရင်းသွင်းခြင်းကာလအတွက်ငွေပမာဏကိုပေးချေခြင်းဖြင့်သင်စာရင်းသွင်းခြင်း (subscription time ရှည်လေ၊ လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာ) ကိုသင်ရယူသည်။ လစဉ်ကြေး (အဆုံးတွင်) အကြားပါ ၀ င်သော box တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်။ ထုတ်ကုန် ၆ ခုနှင့် ၈ ခုသည် Geek နှင့် Gamer world နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်သိသည့်ဂိမ်းများ၊ Marvelတ္ထုများ၊ DC၊ ၁ သီးသန့်တီရှပ်နှင့်လစဉ်အခင်းအကျင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အဘယ်အရာကိုအထူးစေသည် Loot သေတ္တာ ကြိုက်တယ်အခြားသူတွေအကြောင်း Geek လောင်စာ? မင်းကိုပြပါရစေ ...
ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ခံရရှိထားသောသေတ္တာများသည်ယူရို ၂၉ နှင့်တန်ဖိုး ၄၀ နှင့်ယူရို ၅၀ ကြားရှိသည်သို့သော် ၀ ယ်သူအားလုံးအကြားကံကောင်းသူတစ် ဦး သည်သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်မတူသောသေတ္တာကိုလက်ခံရရှိသောကြောင့် ၄ င်းပျောက်ဆုံးနေသောကိန်းဂဏန်း ၄ ခု၊ ပိုစတာ၊ pin နှင့် T- ရှပ်အင်္ကျီများရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက်လက်ခံရရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လများကဥပမာဂိမ်းကစားခြင်းခလုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ နာမည်ကြီးသည့် Geek သို့မဟုတ် Gamer အခင်းအကျင်း၊ သီးသန့်အရာဝတ္ထုများ၊ Corsair၊ Razer စသည့်အမှတ်တံဆိပ်များမှပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မူရင်းရုပ်ထုတစ်ခု၊ ၅၀ လက်မအရွယ် Samsung ရုပ်မြင်သံကြား၊ တိုတိုပြောရရင် Mega Caja၊ € 2.000 ထက်သာ။ ကြီးမြတ်တန်ဖိုး ယူရို ၂၉ သာကျသင့်မည်ဆိုပါကတစ်နှစ်တာကိုတောက်ပစေပြီးကံကောင်းသူအတွက်ခရစ္စမတ်ကိုမျှော်လင့်လိမ့်မည်။
Loot Crate ဆိုတာဘာလဲ၊ Mega Box ဆိုတာဘာလဲသိပြီ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာသိပြီ။ စပိန်ကိုရောက်တာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲ၊ ဒီသတင်းကဘာလို့ gadget ဘလော့ဂ်နဲ့ကိုက်ညီတာလဲ။ ဤအရာအလုံးစုံကိုသိလျက်၊
အထက်တွင်မြင်ရသည့်အရာသည် timer တစ်ခုဖြစ်သည် (သို့) Loot Crate timer ၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စက်တင်ဘာအကွက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဤဆောင်းပါး၏ရေးသားမှုမှ ၆ ရက်ကျန်ခဲ့ပြီ၊ ယခုလဆောင်ပုဒ်မှာ "Summoners" ဖြစ်ပြီး၊ Blizzard ပစ္စည်းများပါဝင်သည် ပိုကီမွန်ပစ္စည်းနှင့်သီးသန့်တီရှပ်အဖြစ်။ ငါဘာတွေစောင့်နေတာလဲ။
ပြီးဆုံးဖို့ငါဒီလမှာ Loot Crate မှာတွေ့ရမယ့်အရာတွေအကြောင်းမင်းရိုက်ကူးတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုထားခဲ့ပါ။ သတိရပါ စာရင်းသွင်းရန်သင်သာရှိသည် ဒီ link ကိုရိုက်ထည့် သင်၏အမှာစာကိုချပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » နောက်ဆုံးတော့ Loot Crate ကိုစပိန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်
မင်းရဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပါ
အိုင်ဖုန်းအသစ်များနှင့် 4K ဗီဒီယိုမိနစ်တစ်မိနစ်မည်မျှယူသနည်း။